musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica Inogashira Itsva Sevhisi kubva kuAmerican Airlines
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Jamaica yatambira mhepo itsva kubva kuPhiladelphia International Airport (PHL) kuenda kuKingston's Norman Manley International Airport (KIN) kubva kuAmerican Airlines, ichipa imwe sarudzo yakanakira vafambi vanobva kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kuti vasvike kuchitsuwa. Ndege yekutanga yakasimuka musi wa4 Mbudzi uye yakapembererwa nemitambo yechinyakare inoratidza tsika yechitsuwa inodziya uye ine simba pakusvika muJamaica.
Vamiriri vanobva kuJamaica, American Airlines, nePhiladelphia International Airport vakaungana kuzotambira vafambi vari kuenda kuJamaica mundege itsva.
Idzi nendege itsva dzekuenda kuJamaica kubva kuPhiladelphia dzinopa dzimwe nzira dziri nyore kune vashanyi uye zvizvarwa zveCaribbean kubva kuNortheastern US kuenda kuchitsuwa.
Inguva yakanaka yegore yekukanganisa vanosvika mumwaka weJamaica wepamusoro.
"Tinofara zvikuru kugamuchira iyi sevhisi nyowani kubva kune yedu yakakura kwazvo inotakura ndege, American Airlines," akadaro Director weTourism, Jamaica, Donovan White. "Ndege itsva idzi dzekuenda kuJamaica kubva kuPhiladelphia dzinopa dzimwe nzira dziri nyore kune vashanyi uye zvizvarwa zveCaribbean kubva kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUS kuenda kuchitsuwa. Nehuwandu hwevanhu vari kunze kwenyika vanogara munharaunda iyi, zvino zvichava nyore kupfuura nakare kose kwavari kubhururuka chaiko muKingston. Tinotenda zvakare kuAmerica nekuvhura iyi sevhisi yekuwedzera panguva yakakodzera yegore yekukanganisa vanosvika mumwaka wepamusoro weJamaica. "
Vamiriri vanobva kuJamaica, American Airlines, nePhiladelphia International Airport vakaungana pagedhi kuti vagamuchire vafambi. kuenda kuJamaica mundege itsva, kusanganisira gumi nevaviri vevamiriri vekufambisa vari kuitirwa nzendo dzemhuri neJamaica Tourist Board. Pamusoro pekucheka-ribhoni, vese vaivaraidzwa neruzha rwemhanzi rweJamaican mimhanzi uye inoyevedza Jamaica back packs. Kurumidza kurumwa nemwenje, kusanganisira yechinyakare Jamaican patties, zvakare yakapihwa kubva kuIrie Entrée, yechokwadi yeku Jamaican yekudyira iri muPhiladelphia, ichipa vafambi kuravira kwechitsuwa. Vafambi vakawedzera sampuli yeJamaica yakakurumbira Blue Mountain Coffee.
Sekureva kwaJim Tyrrell, Chief Revenue Officer, Philadelphia International Airport, Kingston inzvimbo yekuenda inosangana nezvinodiwa nevafambi vemazuva ano.
“Sezvo vafambi vatangazve rwendo rwavo, nzvimbo dzepamusoro dzatakaona vanhu vachienda kune idzo dzine
zuva, jecha nemahombekombe uyewo kwavanogona kushanyira mhuri dzavo neshamwari,” akadaro Tyrell. “Kingston anotarisa mabhokisi ese. Yakanaka uye zvakare yaive imwe yenzvimbo dzepamusoro dzisina kushumirwa dzemhuri neshamwari kunze kwePhiladelphia. Iye zvino vanogona kubhururuka kubva panhandare yendege yeguta rokumusha uye kusvika kushamwari nemhenderekedzo dzegungwa nokukurumidza zvikuru.”
Pakumhara muJamaica, Norman Manley International Airport yeKingston (KIN) yakatambira ndege iyi nesarupu yemvura yechinyakare uye kusaruta mureza, mireza yeJamaica neUS ichivheyeswa padivi pemutyairi wendege. Vakuru kubva kuJamaican Tourist Board, Ministry of Tourism neJamaica Hotel uye
Tourism Association yaivepowo kuzokwazisa vafambi vaiburuka uku kuridzwa kwemumhanzi wepamusoro-soro kwakaitika kumashure. Zvipo zvakapiwa kuvatyairi vendege navashandi vendege, nenzira yechokwadi yechitsuwa, kuratidza kuonga basa ravo panguva yokugamuchira kwokugamuchirwa.
Ndege dzeAmerican Airlines 'dzisina kumbomira kuenda kuKingston (KIN) dzava kushanda katatu pasvondo Mon/Thurs/Sun kubva kuPhiladelphia (PHL) dzichisimuka na9:40AM dzichisvika muKingston (KIN) na1:32PM. Iyi sevhisi nyowani ndeyeAmerica
Nzira yechipiri isingamisiki yendege kubva kuPHL kuenda kuJamaica, inoenderana nendege dzemutakuri dziripo dzisingamire zuva nezuva kuenda kuMontego Bay. Marongero endege anogona kushanduka pasina chiziviso, saka vafambi vanokurudzirwa kutarisa www.aa.com yehurongwa hwakagadziridzwa.
Kubva mwedzi uno, American Airlines yakayera ndege inoshandiswa mundege kuenda kuMontego Bay (MBJ) kubva kumaguta avo makuru eDallas/Fort Worth (DFW), Miami (MIA), uye Philadelphia (PHL) kushandisa nharaunda yavo itsva. -Boeing 787-8 Dreamliner ine muviri wekuita izvi. Mutakuri uyu anoshanda nendege dzakawanda zuva nezuva dzisingamire kuenda kubva kumaguta akati wandei eUS anosanganisira Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL), Chicago (ORD), Boston (BOS), Dallas/Fort Worth (DFW, uye Charlotte (CLT).